3k Carbon Fibre China Manufacturers & Suppliers & Factory
3k Carbon Fibre - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-3k Carbon Fibre)
I-T700 3K Full Carbon Fiber Sheet
I-T700 3K Full Carbon Fiber Sheet I-T700S ingamandla ashubile kakhulu, i-modulus carbon fiber ejwayelekile etholakala embonini. Imicu ejwayelekile ye-carbon modulus iyatholakala ngosayizi we-ta kusuka ku-1K kuye ku-24K. I-3K ibonwa njengobuthakathaka obukhulu kakhulu bezimele ze-fpv. Izitokwe zethu ezijwayelekile...
I-Plasi ye-Fibbon Fib ye-Quasi-isotropic 3K
I-Plasi ye-Fibbon Fib ye-Quasi-isotropic 3K Isakhiwo seplastikhi ye-Quasi-isotropic ye-carbon fiber yayiyisakhiwo sohlobo lwe-X esifanele kunazo zonke. Kuzoba namandla kuneshidi le-carbon fiber elijwayelekile. Uhlaka lwe-X lunokuqina okungcono kakhulu lapho indiza. Imvamisa sigcina ama-3.0mm nobukhulu be-4.0mm...
Ishidi le-3K Carbon Fibre Liyathengiswa
Ishidi le-3K Carbon Fibre Liyathengiswa Mayelana nokwakheka kweshidi le-2mm carbon fiber sheet elinqunyelwe usayizi Diy, lingenziwa kungxubevange ye-carbon fiber noma ingilazi yefreyimu enobuso bekhabhoni fiber, ukuqina kusukela ku-0mmmm kuye ku-50mm, ubukhulu nosayizi ngokwezifiso kuyatholakala.I-minyaka...
I-3K Carbon Fiber Tube, iTubing Incazelo Yomkhiqizo Icarbon yengilazi yeCarbon yakhiwa amashubhu e-Carbon Glass Twill (noma i-Plain) Indwangu ye-Weave, i-Unidirectional Carbon ingilazi yepregreg ne-epoxy resin. I-tube okokuqala itafula igoqwe nge-mandrel yesentimitha nobude obuthile. Ngemuva kwalokho ifakwa kuhhavini...
I-Hobbycarbon Full 3k Carbon Fiber Sheet iyathengiswa Mayelana ne-Full Carbon Fib Sheet, inamandla futhi ilula. Ukwelashwa kwe-matte kwamakhabhoni komoya kukwenza umkhiqizo ubhalwe kakhulu. Ngaphandle kwenzuzo yobulukhuni, imicu ye-carbon nayo ayivimbi kakhulu, ilula futhi ipholile. Imvamisa thina ukushuba kusuka...
Indwangu ephezulu yamathayi e-T700 ikhabhoni ye-carbon fiber eyakhiwe
Indwangu ephezulu yamathayi e-T700 ikhabhoni ye-carbon fiber eyakhiwe Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu-500x600mm. Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti engilazi...
3K Carbon Fiber Plate CNC Izingxenye Zokusika
3K Carbon Fiber Plate CNC Izingxenye Zokusika Imishini ye-CNC inezinzuzo ezilandelayo: Ikhwalithi yemishini iqinile, ukucaciswa kwemishini kuphezulu, futhi ukuphindaphinda ukunemba kuphezulu, okulungele izidingo zokwenza indiza. Sisekela ukusika i-CNC carbon fiber ukusika , ukusika i- aluminium ye-CNC , okunye...
I-1.0 / 2.0mm ubukhulu 3k i-matte carbon fiber tube Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lawa Khabhoni we-3K Carbon Fubes Carbon enziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala namasayizi ahlukahlukene (imibala evamile emnyama); Izinhlobo ezenziwe ngokwezifiso...
I-Hobbycarbon CNC isika izingxenye ze-carbon ezi- 3k ze-uav I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende athole...
I-Carbon Fibre Round Tube 3k Carbon Fibre
I-Carbon Fiber Round Tube 3k Carbon Fibre I-3K Twill Matte carbon pole tube ICarbon fiber pipe isetshenziswa kabanzi njengezinto eziyisisekelo ze-Light Airl Tubing, i- aerospace, ukuzivikela, ukuzilibazisa, imikhiqizo yezimoto, imboni kanye nomkhakha wezokwelapha kanye nezinye izinhlelo zokusebenza kubandakanya...
I-3K Glossy / Matte Carbon Fibre Round Tube
I-3K Glossy / Matte Carbon Fibre Round Tube I-Carbon fiber tube isetshenziswe kabanzi emikhakheni ye-hitech, efana ne-aerospace, imishini yokuthunga yesimanje, imboni yezimoto, imishini yezokwelapha, izimoto, ukukhiqizwa kwemishini, ukwakhiwa, ezemidlalo nezinto zokuzijabulisa, ukuxhumana ngezingcingo, ukufudumeza...
3k Carbon Fibre 3K Carbon Fibre Faka i-Carbon Fibre I-3k Carbon Fib Tube 5mm yeCarbon Fibre I-3k Yovens Carbon Fibre Yakhiwa I-Carbon Fibre I-Toray Carbon Fibre